काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन छिट्टै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने बताएका छन् । ‘प्रतिवेदन बुझाउन भारतीय संयोजकले प्रधानमन्त्री मोदीसँग समय माग्नु भएको छ,छिट्टै प्रतिवेदन बुझाइने छ,’उनले भने ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. भट्टराईले ईपीजीले नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्धका सन्धि, सम्झौतादेखि लिएर सबै पक्षको बारेमा पुनरावलोकन गरेको दाबी गरे । उनले थपे,‘ईपीजीको यो दुई वर्षे कार्यकालमा ९ पटकसम्म बैठक बसेर नेपाल–भारतका विभिन्न आयामबारे छलफल गर्यौं ।’
दुवै तर्फका एकल प्रतिवेदन बनायौं । यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने भनेका छौं । ईपीजीको सुरू र अन्तिम बैठक नेपालमै बस्यो । रिपोर्ट अत्यन्तै राम्रो बनेको र दुवै देशको हितमा रहेको पनि उनको जिकिर छ । उनले भने,‘रिपोर्ट कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अहिले दुवै तर्फका संयोजकबीच कुराकानी तथा सम्वाद भैरहेको छ ।’
‘हामीले दुई पक्षीय र बहु–आयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा यी विषयलाई पनि उठाउनुपर्छ । यो सरकारले त्यो काम गर्दै आएको छ,’–भट्टराईले भने । अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुबाट ऋण लिने र त्यसबाट पूर्वाधारका परियोजनाहरु अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उनले भने,‘तेस्रो मोडालिटी भनेको उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विकासका आयोजनाहरु अघि बढाउने हो । उनीहरुले सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने हो । त्यो ह्याण्डओभरको मोडेल दुईवटै हुन्छ । एउटा–उनीहरुले बनाउने र हामीलाई दिने पनि हुन्छ । अर्को चाही उनीहरुले बनाउने र केही समय चलाएर हामीलाई पछि दिने पनि हुन्छ ।’
चीनसँगपनि नेपालको सम्बन्ध उतिकै प्रगाढ रहेको उनले बताए । भट्टराईले भने,‘चीनसँग हामी हजारौं वर्षदेखि एउटै हिमालको दुई तिर बग्ने पानी पिएर हुर्केका छौं । चीनसँग अब यातायातको सञ्जाल जोडिन सक्ने स्थिति भएको छ । रेलको सञ्जालपनि जोडिन सक्ने अवस्था छ । अब दक्षिणतर्फ मात्रै होईन, उत्तरसँगपनि क्रस बोर्डर टा«न्समिसन लाईन (गल्छी–केरुङ) को लागि छलफल सुरु गरेका छौं । यो भोलि किमाथांका र उत्तरतर्फको भु–भागमा बन्न सक्ने कुरा छ। हामी उत्तरतिर पनि कनेक्टिभीटीको सञ्जाल बढाउन खोज्दैछौं ।’
प्रकाशित २९ कार्त्तिक २0७५ , बिहिबार | 2018-11-15 10:12:50